Sida loo geliyaan kasta Video inay YouTube on Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Video > Sida loo geliyaan Video inay YouTube Site on Mac (Yosemite ka mid ah)
Maqaalkani waxa uu ka mid ah laba qaybood oo aad hanuuniyo sidii ay u video geliyaan si ay u YouTube .
Qeybta 1: . YouTube taageeray shuruudaha video Qeybta 2: Talaabo talaabo video ay u geliyaan in ay goobta YouTube.
Qeybta 1: YouTube taageeray qaabab video
File video A waa in ay buuxiyaan shuruudaha soo socda si loo uploaded karaa goobta YouTube.
1. In qaabka la aqbali karo, FLV, wmv, MPEG4, MOV, AVI iyo MPEG.
2. Oo dhererkeedu wuxuu Video gaaban 10 daqiiqo.
3. Size File waa yar yahay 1GB.
Talooyin: Iyada oo qaabab la aqbali karo, Haddii video aan lagu aqbalin, sida MKV, MTS, M4V, iwm waxaad ka heli kartaa Mac Video Converter si loogu badalo videos ay u YouTube ay taageerayaan qaab video ka dibna geliyaan ee la gediyay videos in YouTube.
Qeybta 2: oo tallaabo tallabo ah in video geliyaan goobta YouTube on Mac
Haddii aad hubto in file video ah oo buuxiya shuruudaha kor ku xusan, waxaad uun raaci karaan tallaabooyinka hoose si aad u fudud u geliyaan in YouTube:
1. Saxiix ah account YouTube ama xisaabta Gmail, ka dibna riix badhanka Upload bogga internet YouTube.
Eeg Jaantuska hoose:
2. Nooca in macluumaadka aad file video, oo ay ku jiraan Title, Description, Category iyo tags. Si loo kordhiyo fursadda in aad video fudud looga heli karo, waa in aad la dhigay macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah.
3. Set this video in ay dadweynaha ama kuwa gaarka ah.
4. Riix Upload badhanka video ah. Marka aad aragto suuqa kala socda, riix badhanka Browse in ay doortaan file video aad rabto in aad ka geliyaan. Markaas riix badhanka Upload Video si ay u geliyaan. Ka dib markii Upload la dhammeeyo, waxaad arki doontaa bogga dhamaystirka. Eeg Jaantuska hoose:
5. Riix My Videos oo waxaad arki doontaa tirada hoos ku qoran:
Halkan waxa aad ka arki kartaa warbixinta oo ka mid ah videos uploaded. YouTube kuu ogolaanaya in aad xaalkaa videos adiga oo isticmaalaya afarta badhamada Edit: Edit Video Info , Edit Annotation , samee icon Profile ah iyo Aragti .
Sida loo rogo ama YouTube in AVI Online
Sida loo abuuro Motion Graphics in dib markii Raadka
Top Toban 3D Movies in Raadi qeybtii labaad ee 2014
Sida loo Guba Kodak Videos in DVDs
Sida loo Beddelaan MP4 in WebM
Sida loo abuuro 3D Flash Photo Gallery